CCW oo markii ugu horreeysey u hadlay si ka “dhimris” badan madaxda kale ee mucaaradka ah! | Hadalsame Media
Home Wararka CCW oo markii ugu horreeysey u hadlay si ka “dhimris” badan madaxda...
CCW oo markii ugu horreeysey u hadlay si ka “dhimris” badan madaxda kale ee mucaaradka ah!
(Muqdisho) 27 Abriil 2020 – Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa inta badan tan iyo bilowgii caabuq sidaha karoonaha waxaa kasoo baxayey warar kala duwan oo ay inta badan ka dhadhamayso inay kursi ka kurbaysan yihiin, balse aysan muhiimad badan siinaynin cudurka laayaanka ah ee Covid-19.
Yeelkeede, siyaasiga CC Warsame oo hoggaamiye Xisbiga Wadajir ayaa mar qura moowjadda bedeley, isagoo aan markii ugu horreeysey warkiisa kusoo darin wax siyaasad ah oo boos riixasho u eg balse wuxuu adeegsadey dhaliil wax dhisaysa in kasta oo uu ku daray tiro geeri ah oo aan la hubin, isagoo yiri sidatan:
“Ilo Xog-ogaal ah ayaa ii xaqiijiyeen in ku dhowaad 100 ruux ay shalay iyo xalay magaalada Muqdisho ku geeriyoodeen. Dadka intooda badan waxay u dhinteen Fayriska (COVID-19). Sagaal ka mid dadkaas, oo aan qaarkood aqaano waxay ku geeriyoodeen Isbitaalka Martiini, ka dib markii ay korontadii ka tagtay, mashiinadii ogsijiinka siinayey na ay istaageen. Masuuliyad dari iyo tacadi ka wayn ma jiro in dawladu ay matoor kayd ah Cusbitalka gayn wayso.
CCW ayaa dareenkiisa u weeciyey dhanka shacabka isagoo yiri.
“Walaalayaal xaalada Karoona Fayris way ka sii daraysaa, dawlad dadka wax taraysana ma jirto ee isku tashada. Maadama awood lagula tacaalo Fayriska aysan jirin, intii la kari karayna laga gaabiyey, waxaa qasab ah in aan ku dadaalno ka hortagiisa oo aan qaadano talooyinka dhakhaatiirta. Waxaa na la ka doonayaa talo saarasho Eebe oo taxadar lagu daray.
“Allaha u naxariisto intii dhimatay, allahana dhowro Inta kale, danbigeenana Allaha dhaafo.” Ayuu kusoo af jaray.
Si kastaba, siyaasadda Somalia ayaan inta badan lahayn aragti ku dhisan dad kasbasho iyo ka fikiradda dan guud.
Previous articleDHAQAN CUSUB: Gaadiidka Dadwaynaha Muqdisho oo looga digey dad si khaldan u wajahaya cudurka Covid-19 (Arrin maanta dhacday)
Next articleDHEGEYSO: ”Soomaalidu waxay ku qubaystaan biyaha MAYDKA lagu dhaqo!” – Soomaalida Sweden oo ka caraysan war kasoo baxay siyaasiyad Swedish ah